1915 wersanakkale Bridge si 318lọ elu XNUMX-Meter steel Emezuru | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara17 Canakkale1915 wersanakkale Bridge si ụlọ nchara nke 318 m
17 / 05 / 2020 17 Canakkale, General, hyperlinks, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Emechara ụlọ elu nchara nke ụlọ canakkale
Ebe ngwụcha ikpeazụ nke ụlọ elu uhie na nke ọcha nke 1915 whiteanakkale Bridge, nke a na-arụ, nke nwere ngọngọ 32, dochiri nnọkọ ndị isi ala nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan jiri nnọkọ vidiyo mee.
Karaismailoğlu na-ekwu okwu n'ememe ahụ, Turkey ahụtawo ihe karịrị otu ụbọchị n'ime akụkọ ihe owuwu njem, kwuru na otu n'ime ọrụ ya kachasị mkpa na akụkọ ihe mere eme nke Republic. Na-ekwuputa na ụlọ elu mbu 318 nke ụwa nke àkwà mmiri ahụ arụchaala mgbakọ ngwụcha ikpeazụ nke ígwè, Karaismailoğlu gara n'ihu dịka ndị a:
"Anyị na-etinye eriri 128th ikpeazụ nke ụlọ elu nke anọ anyị. Afara Çanakkale 1915 anyị dị na ụmụ akwụkwọ yana isi ihe dị n'okporo ụzọ awara awara Malkara-Çanakkale nwere ngụkọta nke kilomita iri abụọ na otu. Dịka ezinụlọ nke Minista nke thegbọ njem na akụrụngwa, anyị dị mita 101 n'okpuru ala na nsọtụ ngwụcha nke ọdụ ụgbọ elu nke Istanbul Gayrettepe-izu gara aga. Taa, anyị na-abịanye aka na gị nke ọma na elu nke mita 72. Ihe oru ngo a bu otu n’ime uzo kachasi di mkpa maka odinihu nke njem njem Turkey. Akwa Çanakkale nke 318 karịrị akwa nke jikọtara akụkụ abụọ a, ọ bụ nkwanye ugwu maka akụkọ ihe mere eme anyị. 1915 Çanakkale Bridge, na-ezo aka na narị afọ nke Republic anyị na 2023, ga-abụ onye ndu ụwa na klaasị ya na etiti oge ya ruru puku mita abụọ na 1915 mgbe a rụchara ọrụ ya. Na mgbakwunye, Çanakkale Bridge, nke ga-enwe ụlọ elu kachasị elu n'ụwa, na-anọchite anya Mmeri Oké Osimiri Çanakkale na March 2, 23, nke ịdị elu ya dị mita 318, na-ezo aka na 3 nke ọnwa nke 18. ”
Karaismailoğlu, onye kwuru na Àkwà Mmiri ofanakkale nke 1915 nwere ndị na-egbu mmụọ maka ala nna ma gbalịsie ike maka mmepe mpaghara a, kwuru, “Anyị ga-arụzu ọrụ ahụ na Machị 18, 2022, na-agbasi mbọ ike ịkwụ ụgwọ a. Otutu ibu na ndi njem n’okporo uzo anyi na abawanye kwa ubochi. N'ọnọdụ a, ogologo ụzọ anyị nkewa, nke anyị gbagoro site na 6 puku 101 kilomita ruo puku kilomita 27, ewepụla ibu a na-abawanye elu na njupụta njem njem. Ọ bụ ezie na obodo anyị bụ obodo dị n'akụkụ ụzọ dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ọdịda anyanwụ ruo taa, ọ ghọwo ntọala nke njikọta kọntinent atọ na mpaghara ndịda-north. A ga-eme ka ọnọdụ a sikwuo ike na ọrụ Çanakkale Bridge na 1915 na Malkara-Çanakkale. " iji okwu.
“Inye oge na mmanụ ga-abụ nde Li567 kwa afọ”
Minista Karaismailoğlu kwuru na mgbe emechiri Çanakkale 1915 na 1,5, njem ụgbọ elu 6 ga-adị n'etiti Lapseki na Gelibolu ga-agbadata ruo minit XNUMX, na mmefu ụgbọ ala na mfu akụ na ụba ga-ewepụ.
N'ikwu na mkpọchi okporo ụzọ, ikuku ga na-ebelata na mmetọ nke mkpọtụ ga-ebelata, Karaismailoğlu kwuru, “A ga-ebelata ọnwụ na ndụ nke ihe ọghọm okporo ụzọ belata. A ga-eme ka njem dị mkpụmkpụ, ngwa ngwa na mfe karịa. Canakkale, Turkey abụghị naanị ga-agbakwunye uru na usoro mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze ga-emepekwa ọkwa ọhụrụ na njem. Bringchịkọta mpaghara Thrace na Aegean ya na kọntinent Europe, Çanakkale Bridge nke 1915 ga-ejikọ ụzọ azụmahịa na mpaghara anyị, ọ ga-ewetakwa nnukwu uru maka akụ na ụba. " kwuru.
N'ikwupụta na okporo ụzọ Mịnịsta-Çanakkale, nke gụnyekwara àkwà mmiri ahụ, ga-abụ nnukwu akwara jikọọ Istanbul, Kırklareli, Tekirdağ na Edirne na mpaghara Aegean, Karaismailoğlu kwuru:
“North nke Marmara, Kınalı-Tekirdağ, Çanakkale Balıkesir Motorway na ọdịda anyanwụ na ndịda Balıkesir-Bursa na Kocaeli okporo ụzọ ga-emecha mgbanaka mgbaaka gburugburu Marmara dum. Ọ ga - abụrụ ụzọ ọzọ ga - esi agafe Bosphorus maka okporo ụzọ ga - agaru Europe na Thrace, ọdịda anyanwụ nke Aegean na Central Anatolia, Adana-Konya axis na Western Western Mpaghara. N’okporo ụzọ anyị nke ga-abụ kilomita iri abụọ na abụọ, okporo ụzọ steeti dị ugbu a ga-eme ka ọ dị ihe dị ka kilomita iri anọ. Ego oge na mmanụ ga-abụ nde li101 kwa afọ. Anyị na-aga n’ihu ọrụ anyị site na ịme ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịdị ọcha yana nyocha ahụike mgbe niile site na ịchebe ihe niile gbasara ọrịa nke Kovid-40, nke na-emetụta ụwa niile. Dịka anyị karịrị puku puku saịtị a na-ewu ụlọ na mba ahụ, anyị na-eme ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ 'ahụike mbụ, nke mbụ mmadụ' n'ọrụ ndị a. Site na nchedo anyị butere n’agbanyeghi usoro oria ojoo a, ọrụ na-aga n’ihu n’ebe anyị na-ewu ụlọ n’enweghị nsogbu ọ bụla. Anyị na-agbasi mbọ ike iji bulie netwọ ụgbọ njem Turkey. Anyị na-akwado mba anyị maka ọdịnihu site n'ike anyị na-enweta site na mba anyị. Anyị nwere ibu ọrụ nke ịghọta ihe akpọrọ ihe na-agaghị ekwe omume, na-anya isi obodo anyị na oru ngo zuru oke maka ụwa. Site n'ọrụ a, anyị kwenyere na anyị ga-arụ ọtụtụ ọrụ aka na steeti anyị na mba anyị. ”
Owuwu nke 1915 Çanakkale Bridge amalitela
E debere 1915 Çanakkale Bridge na ememe
E debere 1915 Çanakkale Bridge
Ntinye ebe obibi nke 1915 Çanakkale Bridge
Gọọmenti okporo ígwè Gayrettepe-Airport
Usoro nro nke Çanakkale Bridge amalitela
A na-ewere akwụkwọ nke 1915 Çanakkale Bridge echi